Ndezvipi zvitsvene zvakasikwa zve backlink zvinounza kukosha pawebsite yako?
Mazuva ano, kutsvaga injini yekugadzirisa maitiro ekugadzirisa kunowedzera kuoma uye kwakanaka. Google inopa maitiro matsva akadaro se "DA" (Domain Authority) uye "PA" (Peji Yepamusoro) kuti ipe PejiRank iyo yakakosha kare. Aya mapoka matsva anoshandiswa zvakanyanya kushandiswa kwehutano hwemawebsite.
Kugadzira unhu uye hune simba hwehupfumi hwehupfumi hwekutsvaga nderota yewe websaiti yemuwebsite uye blogger. Simba rekuremekedza kumashure rinogona kuunza huwandu hwakawanda panzvimbo yako. Chokutanga pane zvose, vanogona kuvandudza nzvimbo yako yewebsite paSERP. Chechipiri, vanotakura zvinangwa uye kutendeuka kuenda kune yako yepaiti uye chechitatu vanosimudzira bhizimusi renyu rezvemari.
Haisi basa rakanyanya kuwana backlinks kubva kumaDA marefu. Iwe unofanirwa kuva neruzivo rwakakosha uye unyanzvi kuti ugadzire kukunda kambani yekuvaka musangano. Zvisinei, haufaniri kurega kunyange kana iwe uchinzwa ushayiwe ruzivo munharaunda ino. Muchikamu chino, uchawana mazita eDA mawebsite mazita ayo anobvuma mabhodhi kubva kune vashandisi vatsva uye anovapa mukana wekuumba purogiramu itsva. Zvakare, ndichagoverana newe mamwe mazano ekugadzira zvakanakira backlinks profile.
Kana uri kushandisa chigadzirwa uye unogutsikana nehuhu hwahwo, funga kutumira uchapupu. Paunenge uumba uchapupu, iva nechokwadi chekucherechedza kuti mupiki wemugove anogona kuisa pane peji rake kana peji yehupupuriro. Sezvo mutemo, vateresi vanoisa chibvumirano chako pedyo neuchapupu kuratidza kuti uri munhu chaiye. Saka, unogona kuwana unhu nehutano hwehupenyu hunobva paupupuriro.
Tsvaga kuwana mikana yekubatanidza kuburikidza nebhuku rekuongorora
rishandure rikave rakakosha uye rakasununguka kumashure. Iwe unogona kuzviwana nokuzvipa kune mablogiki kana kukumbira vatengi vako kuti vabve mhinduro.
Tevera iyi murayiridzo kuti uwane zvakakonzera shure kune yako yepaiti kuburikidza neBloggger:
Tsvaga blogger mune niche yako iyo yatotumira chimwe chinhu chakaenderana nekambani yako. Isa mubhokisi reGoogle kutsvaga mubvunzo nemashoko ako anokosha. Somugumisiro, injini yekutsvaga ichakupa urongwa hwemawebhusayithi uye mabloggi ayo anotaura kumhizha yako.
Shandura kunze kwemasimba makuru makuru uye nzvimbo itsva. Pakupedzisira, iwe uchasara uri nehuwandu hwemashoko mablogi vanogona kufarira mupiro wako.
Shingairira kune vanoita webhuweti uye mablogiki kuburikidza ne email kana foni. Iva nomutsa uye uremekedze kwavari uye nyatsoteerera pamusoro pemutauro waunoshandisa. Inogona kuva iwe kuitira kuti iwe unobvunzwa pamusoro pekubhadhara kana chero imwe mamiriro ezvinhu anobatsira.
site yako. Iwe unoda kuwana zvakataurwa pamusoro pewebsite yako apo nzvimbo yako yekutsinhanisa haina kuratidzirwa. Chinhu chipi nechipi chaunoda ndechokubatana nemunyori wekutaura uku uye kumubvunza kuti awedzere chibvumirano chako. Izvi zvinoshandiswa sevhoti kune marimi ako uye kuwedzera mahofisi ako webusaiti mumaziso eGoogle Source .